२० रुपैयाँको जार पानीलाई ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ?
सुविन अधिकारी, शंखमुल काठमाडौं print
विक्रेताहरुले बेच्ने पानीमा उपभोक्ताबाट प्रतिजार ५० रुपैयाँ लिन्छन्। मैले नियमित उपभोग्य सामान किन्ने नजिकैको पसलले पनि ५० रुपैयाँ नै लिन्छ।
तर उद्योगले भने त्यो पसलेलाई २० रुपैयाँमै दिँदो रहेछ। मैले एक दिन उद्योगलाई नै फोन गरेर सोँधे ‘मेरो पनि पसल छ, पानी झार्दा कतिमा दिन सक्नुहुन्छ?’ उसले भन्यो ‘२० रुपैयाँमा दिउँला ।’
तर नजिकैको किराना पसलकोमा आफैले पानी ल्याउँदा पनि ५० रुपैयाँ लिन्छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर बेच्नु कालोबजारी हो भन्ने सुनेको थिएँ।
यसरी व्यापारीले ठगिरहँदा सम्वन्धित सरकारी निकायले के हेरेर बसेका छन्?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १५, २०७३ १३:२८:०८